चलचित्र ‘द डार्क एण्ड लाईट’को ट्रेलर र गीत रिलिज | Samacharpati चलचित्र ‘द डार्क एण्ड लाईट’को ट्रेलर र गीत रिलिज – Samacharpati
काठमाडौँ, ३० असार । चलचित्र ‘द डार्क एण्ड लाईट’ को अफिसियल ट्रेलर र गीत रिलिज गरिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी फिल्मको प्रमोशनल सामाग्री सार्वजनिक गरिएको हो । खालिङ्ग सिस्टर्स मूभिज प्रा.लि. को व्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको सार्वजनिक ‘राधा किसन’ गीतमा राजेन्द्र थापाको शब्द, दीपक शर्माको संगीत तथा डेविड शंकर र सरस्वती भूजेलको स्वर रहेको छ । चलचित्रको कथा, पटकथा तथा संवाद पिटर खालिङ राईले लेखेका हुन् । पिटर र स्वरस्वतीको संयुक्त लगानीमा तयार भएको फिल्मलाई राजु अर्यालले निर्देशन गरेका हुन् ।
चलचित्रमा पिटर खालिङ, सरस्वती भूजेल, शेसुका राई, मरिष्का पोखरेल, मनिल तामाङ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । खेलाडी समेत रहेकी शेसुका फिल्ममा एक्सन अवतारमा देखिएकी छिन् । निर्माण यूनिटले यो चलचित्र एक्सन लभस्टोरी जनरामा केन्द्रित रहेको जानकारी दियो । चलचित्रमा सुवास देवकोटाको सम्पादन, कमल राईको नृत्य निर्देशन तथा सविन भट्टराईको छायांकन रहेको छ । यो चलचित्र आगामी भदौ ६ गते सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ । चलचित्रलाई सरोज शर्मा र सुनिता भट्टराईले वितरण गर्नेछन् । रिसाए कमल गाउले । थुईक्क थुईक्क थुईक्क भन्दै किन यस्तो भने ?
‘सोच’को ट्रेलरमा पुजनको एक्शन,नीता र प्रज्वलको प्रेम
‘लभ यु हमेशा’ को टिजर सार्वजनीक फिल्म भदौ २७ मा रिलिज
लागूऔषध दुर्व्यसनी विरुद्दको दिवसमा आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सम्पन्न
ग्लोबल र मोनाष्टिक सेमिफाईनलमा, साम्भवी र एभरेष्ट क्वाटरफाईनलमा
सशस्त्र प्रहरीका १५१ जना डीएसपीको एकैपटक सरुवा